Agụụ Ọrụ Ndị Isi Ọrụ | Mmemme Asambodo Ntanetị Maka Irụ Ọrụ na Childrenmụaka
Agụmakwụkwọ Onye Ọkachamara
Mmemme Asambodo Ntanetị Maka Irụ Ọrụ na Childrenmụaka
Ọzụzụ n'ịntanetị 20 a n'ịntanetị na-enyere ndị na-achọ ọrụ aka inweta nkà dị mkpa iji soro ụmụaka na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ nlekọta ụmụaka ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ na BC.
Site na oge mmekorita mmekọrịta, Responkpụrụ Ọmụmụ Ihe Nlekọta Ọrụ Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Intanet na-ekpuchi echiche ndị bụ isi banyere mmepe nwata site na afọ ruo 12 afọ nduzi, ahụike, nchekwa na nri.
Gọọmentị nke British Columbia enyela ikike ọzụzụ maka nkuzi ndị okenye nwere ọrụ maka ndị niile ha na ụmụaka na-arụ ọrụ.
Usoro nkuzi ntorobịa nke intaneti a na-ezute Iwu ikikere ụmụaka nke BC chọrọ maka ndị mmadụ n'otu n'otu ka ha nwee opekata mpe elekere 20 nke ọzụzụ gụnyere nchekwa, mmepe ụmụaka na nri iji soro ụmụaka.
Ọzụzụ n ’ọzụzụ ọrụ okenye nke nọ n’ ọrụ ịntanetị na-eme ka ndị na-achọ ọrụ nweta ọrụ na BC iji nweta ahụmịhe dị mkpa maka iso ụmụaka na-arụ ọrụ. Akụkụ kacha mma bụ na ụzọ ahụ dị onwe ya. Studentsmụ akwụkwọ nwere ike ịmalite akwụkwọ ahụ mgbe ọ dịịrị ha mma, ma mezue mgbe ha dị njikere. Enweghị oge ọ bụla.
N'ịkwụ ụgwọ, ụmụ akwụkwọ na-anata ozi nnabata email nwere ntuziaka ịbanye. Nwa akwụkwọ a nwere ike pịa njikọ dị na email wee bido na nkuzi ahụ. Enwere ajụjụ a na-eme n'oge niile, yana ule ikpeazụ na njedebe ikpeazụ. A gụchara akụkụ niile nke usoro ahụ n'ịntanetị, yana akwụkwọ ndị ọzọ anaghị arụ ọrụ achọrọ.
Mgbe ha gụsịrị ule ikpeazụ, ụmụ akwụkwọ ahụ ga-ezitere ha asambodo mmecha, nke enwere ike iji nweta ọrụ na ngalaba nlekọta ụmụaka.
Inye ego WorkBC
Ndi WorkBC jikwa nkwado Ulo oru nke Ndi oru Izi Intaneti. Nke a pụtara na ego gọọmentị nwere ike ịdị site na mpaghara ọrụ ndị ọrụ ime obodo. Ndị na-achọ akwụkwọ ga-abụrịrị ndị na - achọ ọrụ ma na - etinye akwụkwọ ka ha bụrụ ndị ahịa nke ebe ọrụ ha. Gaa na anyị Ego Gọọmentị peeji maka nkọwa ndị ọzọ.
A Ga-enweta ursezọ Ndụmọdụ Adọ Ochie
karịrị Asụsụ 100
Were Oru ntorobia ndi kwesiri ntukwasi obi na asusu nke ihe ichoro!
Jiri ihe nchọgharị Google Chrome,
wee pịa bọtịnụ ntụgharị mmanụ oroma
n’elu peeji nke ọ bụla.
You nwere ike ịhọrọ ịmụ akwụkwọ ntanetị dị n'asụsụ ịchọrọ.
Pịa njikọ dị n'okpuru ebe a iji lelee Agụmakwụkwọ n'asụsụ gị
Video Adult Agụmakwụkwọ Agụụ
Onye Nkụzi gị
Roxanne Penner bụ onye nwe 4Pillar Early Center Center na Powell River, BC.
Ọ bụ onye nkuzi nwatakiri nwere ikike izizi nwata akwụkwọ, onye na - ahaziri agụmakwụkwọ na onye na - azụ ECE.
Ọ na-arụkwa ọrụ dị ka onye nchịkwa ezinụlọ ma na-arụ ọrụ dị ka onye na-azụlite nwa site na Ozi nke Ministrymụaka na ezinụlọ ruo ihe karịrị 17 afọ.
Roxanne anọwo na-akuzi nkuzi maka nkuzi ndị okenye na-aza ajụjụ site na mmemme n'ime mmadụ ruo ihe karịrị 10 afọ.
Ugbu a nkuzi a dị na ntanetị maka ndị nhazi oge ya ma ọ bụ ebe ọ na-anaghị enye ha ohere ịnara ọzụzụ ahụ n'onwe ha.
A na-ewere Agụmakwụkwọ Ezigbo Ndị okenye na ntanetị n'ọtụtụ ọmụmụ na obere ajụjụ. Iszọ ahụ kpamkpam na-ejikwa onwe ya. Studentsmụ akwụkwọ nwere ike ịmalite n'oge ọ bụla, ma nyocha nke ikpeazụ mgbe ha dị njikere. Na ngwụsị nke akwụkwọ ahụ, ụmụ akwụkwọ ga-anwale ule ikpeazụ nke intaneti n'ịntanetị, a ga-eziga akwụkwọ ozi maka mmecha. Akarafe ngafe bu 70%, a na-enyocha ule iji nwete ya rue mgbe akara mmeri.
Ndị bịaranụ ga-abụrịrị 19 afọ dịkarịa ala iji debanye aha, mezue ihe ọmụmụ niile ma gafere ule ikpeazụ na akara ngosi na-eju afọ iji nweta asambodo nke Agụmakwụkwọ Adult nke Mmeju.
Biko rịba ama, onye nkuzi Roxanne Penner na-ewepụta onwe gị site na ozi ịntanetị n'oge ị na-aga iji zaa ajụjụ ọ bụla ị nwere.
Asambodo Nkuzi Ntanetị
Usoro Ọmụmụ Adult Adult Naa
Àmà ụmụ akwụkwọ
Okenye Na-ahụ Maka Onlinentanetị N'ezie dị nnọọ mfe idebanye aha na mezue! Site na mbido imecha akwukwo a bu ihe omuma ma di nfe isoro.
Roxanne dị ka onye nkuzi abụwo nnukwu ihe! Ọ lọghachiri na ozi ịntanetị m ngwa ngwa ma ọ dị mgbe ọ bụla iji zaa ajụjụ m mgbe m nwere nke ọ bụla.
Ihe kacha masị m maka ihe ọmụmụ ahụ bụ etu o siri dị omimi. Ọ ga-agafe karịa ka esi arụ ọrụ na ụmụaka nwere mkpa ahụike dị iche iche, nke m chere na ọ dị mkpa maka onye ọ bụla na-aga n'ọhịa.
Mgbe m gụsịrị akwụkwọ Ọkachasị Respongwọ Ọrụ na Inyocha ule ahụ, enwere m obi ike na m ga-enwe ike ịrụ ọrụ ọhụrụ m na nghọta ka mma banyere ụzọ isi bụrụ okenye tozuru oke.
Mgbe ọ gụchara akwụkwọ nkwụghachi ụgwọ nzizi nwata akwụkwọ tozuru oke ịrụ ọrụ na:
Nlekọta umuaka umuaka n’ulo akwukwo (enyere ikikere)
Mgbe ụfọdụ Carelọ Nlekọta ụmụaka
Dịka onye nnọchi ma ọ bụ dochie anya / ịkpọ oku maka ndị na - enyere ndị ọzụzụ aka n'oge ụmụaka aka na - elekọta ụlọ ọrụ nlekọta ụmụaka.
Mmemme Mbelata Ezinaụlọ, Ndị Enyemaka Childmụaka ma ọ bụ ọnọdụ ndị ọzọ metụtara
Amalitere Nlekọta Ezinaụlọ Ezumike
Nanny ma ọ bụ Babysitting
Bido ugbu a!
Nkuzi Ntanetị $ 125
Mmụta mbido nke 4Pillar nwere mpako inye onyinye nke afọ ojuju nke 100% na Usoro Nkụzi Onye Ọzụzụ Ndị Ọrụ Dị na Onlinentanetị.
Y’oburu n’inweghi obi uto na nkuzi a, anyi gha agbaghachi gi azuma ahia gi.
Biko rịba ama, a gaghị enye asambodo nke mmezu maka nkuzi akwụghachi ụgwọ.
Nleba Anya Nwatakịrị ọzọ
Ana m akwado Roxanne Penner nke ukwuu dika onye nkuzi nkuzi ndị okenye nwere ọrụ.
Ọ bụ onye nkuzi zuru oke ma nwee oke mmasi nke na-enwe ọfụma n'ọhịa ọ na-arụ ọrụ. Ọ bụ ihe obi ụtọ iso ya na-akpakọrịta.
Ewere m ụzọ ntorobịa nwere mmesi ọrụ wee hụ na ọ na-akọ ihe. Roxanne Penner mere klaasị kọọ ihe na ịmụ ihe site na usoro izizi ya bụ ikuku.
M ga-akwado nnukwu ịdebanye aha maka agụmakwụkwọ a.
Agụmakwụkwọ Ndị Nlekọta Dịịrị Ndị Ọrụ Igwe Ọdụdọ bụ ahụmahụ mmụta dị egwu. Ahụrụ m na Roxanne dị njikere ịza ajụjụ ọ bụla m nwere n'ụzọ.
Enwetara m asambodo n'oge na-adịghị anya mgbe m gụsịrị akwụkwọ, nke nyeere aka n'oge m na-etinye akwụkwọ maka ọrụ na-elekọta ụmụaka.